INTA AY SALFADEEN MA SUGAAN..! | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
INTA AY SALFADEEN MA SUGAAN..!
(BAHAL WAA LAYSKA OODAA INTA UUSAN OOFTA KU GOOYNIN.)
Marka hore waxaa tacsi u dirayaa dhamaan umadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan intii ay eheladoodu ku dhinteen qarixii tiyaatarka anigoo intii ku dhaawacantayna u rajeeynaya caafimaad deg deg ah si gaar ah Gudoonkii gudiga Olombikada Aadan Xaaji Yabarow iyo dhigiisii xiriirka k.c Siciid Mugaambe (ALLA YAA RAXMA).
Waxaa jirta oraah falsafadeed tiraahda ‘’REER GALBEEDKU MAAHA CABQARIYIIN, ANAGUNA MA NIHIN AXMAQIIN, LAAKIIN IYAGU QOFKOODII FAASHILKA AHAA BAY TAAGEERAAN SI UU GUULEYSTO, ANAGUNA KEENNII GUULEYSANAYAY BAANU LA DAGAALANNAA SI UU U FASHILMO’’.
Maanta waxaa Muqdisho ka dhacday dhacdo dhiigleey ah oo dhiillo iyo dhabannahays hor leh ku ridey shacabka masaakiinta ah ee uu calafkoodii noqday inay kala door bidaan SHABEEL, LIBAAX, WEER iyo WARAABE maadaama ay la’yihiin cid ay rasmi ah ugu ladaan.
In wax la qarxiyaa dabcan maaha wax dhegeheena ku cusub waloow ay tani ahayd dhacdo ugub ah maadaama ay ahayd markii ugu horeeysey ee qof dumar ah loo adeegsado qaraxyada lagu qalo dadka masaakiinta laakiin dayacaadda ayay dadku dabcan dood ka qabaan.
Wararka soo baxaya oo aan la hubin ayaa sheegaya inay xafladu u socotey si caadi ah oo ay khudbooyinka isu dhaaf dhaafayeen marti sharaftii meesha lagu martiqaaday iyadoo gabadha la sheegay inay is qarxisay oo lagu qiyaasay 18 jir aad u lebisan ay fadhisay safka 3-aad ee kuraasida.
Waxaa deeto istaagey ra’iisul wasaare GAAS oo lasoo gaarey xilligii khudbadiisa waxaase ka daba istaagtey gabadhii is qarxisay balse waxaa istaajiyay qaar ka tirsan ilaaladii goobta oo bilaabay inay si shaki kujiro u waydiiyaan sababta ay ugu socoto jihadii uu taagnaa Wasiirka 1-aad.?
Markii mudo yar hadalkii lagu celceliyay ayay sida la sheegay door biday inay is qarxiso maadaama uusan dooq kale u furnayn.
Waxaa jira warar kale oo sheegaya inay miinadu meesha sii taalay sidii SHAAMOOW oo dabeeto ama remote laga qarxiyay amaba ay noqon karto mid waqtiyaysnayd (Time bomb).
Sida iyo goorta ay gabadhu goobta soo gashay ayay dood badani ka joogtaa dad baana ku doodaya in iyadoo aan la baarin ay soo daayeen saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka laftooda oo ay u ‘’DHOOLA CADAYSAY’’ waraka qaar baa xitaa madaxda dowlada xisaabta ku daraya.
Si kasta oo uu xaal yahayba su’aalaha ay maanta dadka Soomaaliyeed is waydiinayaan waxaa ugu waaqicisan:
‘’Maxaa mar kasta keena habacsanaanta dhanka amaanka ah.?
Ma laga yaabaa inay jiraan dad kooxaha wax qarxinaya la shaqeeya oo kujira xayndaabka hoose (The inner circle) ee dowlada..?
Mase laga yaabaa in lacag lagu dhaafo shakhsiyaad ka tirsan kuwa amaanka suga..?
Dadka ma waxaa diley dulligii qarxiyay mise DKMG ah oo amaankoodii dayacday.?
Su’aalahan jawaabo saaxi ah saaka looma heli karo laakiin marka aad eegto qaabka ay u abaabulan yihiin canaasiirta dhinaca amaanka ee DKMG ah ’’HAA’’ baad is oran kartaa.
Qiyaas ciidan ka kooban maliishiyooyin hore oo ay qaarkood ka amar qaataan ashkhaas gaar ah oo aan lahayn tababarkii, khibradii, dadnimadii iyo tan ugu daran oo ah daryeelkii ay u baahnaayeen.
Qiyaas DKMG ah oo iclaamisa oo buunbuuniso xaflado aysan sida muuqata amaankooda ku filleeyn iyadoo ku doodaysa inuu soo hagaagay amaanka caasimadu taasoo kooxahan manaxayaasha ah u sahasha inay qorsheeyaan qaabkii ay ka yeeli lahaayeen oo ay dhowr mar si fudud ugu guulaysteen.
Isla todobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay ku goodinayeen saraakiil ka tirsan waaxda amaanka qaranku inaan la dhigi karin dibad bax lagu diidanaa AUGUSTINE MAHIGA sababo amaan darteed adigoo is waydiin kara sababta loo qabanayo xaflado iyo ruwaayado hadiiba uusan amaanku saaxi ahayn oo isu soo baxyadii aayaha dadka khuseeyey xaalad ’’AMAAN’’ darteed loo mamnuucay mise kaas MAHIGA ayaa mamnuucay.
Qaraxani wuxuu ahaa qarixii 3-aad oo dad shacab ah iyo kuwa wax gal ah lagu galaafto iyadoo ay muuqato inaysan wax naxariisa kujirin kooxaha laayaanka ee inta masaakiinta laaya aayadaha Ilaahay ku been abuurta isla markaana biri magaydadii ay midna soo miineeyeen midna ku qarxiyeen ’’CADOW ILAAHAY’’ ku sheega.
Balse waxaa nasiib darro ah in BAHAL aad ogtahay inuusan ku dhaafayn uu dhiifoonaan la’aan kuugu soo dhuunto oo uu dhiigaaga ku qubaysto adna aad maalin kasta taagnaato sidii sheeka xariiradii ay kujirtey ’’SHALAYNA WAA ILA ARIN DIIDANAYD, XALAYNA WAA ILA OROD YARAYD, HAATANA WAA ILA AQOON YARTAHAY’’.
Waxaan sidaa u leeyahay dadkii waxay qaati ka taagan yihiin qaraxyada noocan ah oo had iyo goor u dhaca sida ay u qoondeeyeen kooxaha ka dambeeyaa taasoo hoos u dhigaysa kalsoonidii ay shacabku ku qabi lahaayeen jawaab bixin guulaysata oo ka timaada ciidamada amaanka oo laftoodu gacan wayn ka gaysta amaan xumada laga cabanayo.
Waxaan soo jeedin lahaa qodobadan si intii suura gala loo baajiyo baaba’a iyo balaayada socota:
1-In la dhimo oo ilaa iyo xad la yareeyo qabashada xafladaha faataa dhugta ah sida ruwaayadaha lagu qabto tiyaatarka qaranka iyo meelaha kale ee la iskugu yimaado ilaa iyo inta amaanka wax muuqda laga qabanayo.
2-In ciidamada amaanka far loo celiyo iyadoo la adeegsanayo halbeegyo ay ka mid yihiin Aqoonta maadiga ah iyo tan macnawiga ah ee qofka askariga laga dhigayo, u jajabnaantiisa awaamiirta saraakiisha ka saraysa, da’diisa/da’deeda, dib u eegis lagu sameeyo waxa uu qofkani ahaan jirey horaan IWM.
3-In nidaamka ay ku shaqeeyaan waaxaha amaanka dib u eegis lagu sameeyo min heer maamul ilaa heer hoose isla markaana laalaabka iyo fara faraynta laga daayo MUSHAHARKA ciidamada kujira waajibaadka.
Wax soconaya oo la aqbali karo maaha in shacabka laga laayo dadka waxgalka ah sida dhakhaatiirta, Injineerada, macalimiinta, culumada, weriyayaasha, fanaaniinta, oday dhaqameedyada, ganacsatada iyo xirfadleeyda kale iyadoo la adeegsanayo jiilkii uu dalku u baahnaa oo ah dhalinyarada taasoo nagu ah khasaare ’3 JIBAARAN’.
Waayo waa mare indhihii baa dadkii la tirayaa, marna dhabarkii baa laga jebinayaa, marna kuwa madaxda isku sheegayee labada dhinac kala taagan ayaan ahayn kuwo u qalma dadka ay laynayaan (qiyaas gabar 18 jir ah oo la yiri ’’IS QARXI JANNAAD U SOCOTAAYE?’’) ama difaacooda u dhimanaya waxaana markaas kugu soo dhacaya inaad is waydiiso ’’ABOOWAYAALOOW INTA AY SALFADEEN WALBA MA SUGAAN’’.? Taasoo ah su’aal ay adagtahay inaan ’HAA’ kaga jawaabo.
ALLAHAYOOW SOOMAALIYA SIDII ROON..AMIIN
Qaraxii Raysalwasaare Gaas Qiso baa kadanbaaysa (Faallo) Generaal Maxamed Nuur Galaal oo Khiyaano Qaran ku Tilmaamey Heshiiska Dhexmarey Dowladda Federaalka iyo Shirkadda Hallidayfinch